Simona Bar Kokba - Wikipedia
Simona Bar Kokba
Sarin'i Simona Bar Kokba, eo amin'ny Knesset Menorah ao Jerusalem
I Simona Bar Kokba dia lehilahy mpitarika ny fikomian’ny Jiosy tamin’ny Romana teo anelanelan’ny taona 132 sy 135.
Aminn'ny teny arameana ny anarany dia atao hoe שמעון בר כוכבא / Shimon bar Kokhba izay midika hoe "Simona zanaky ny kintana".
Tamin’izany fotona izany dia niezaka ny hampanjaka ny kolontsana romana tao Jodea ny emperora Hadriano (latina: Publius Aelius Hadrianus Augustus) ka tsy namela ny Jiosy hiditra ao Jerosalema afa-tsy indray andro isan-taona, ary nandrara azy ireo tsy hanao famorana. Raikitra noho izany ny fikomian’ny Jiosy. I Bar Kokba no nitarika izany fikomiana izany, izay notohanan’ny iray amin’ireo raby nankatoavin-teny indrindra tamin’izany, dia i Akiva ben Josefa, izay nanambara azy ho Mesia (hebreo: מָשִׁיחַ‎ / māshîaḥ) nalefan’Andriamanitra hamerina indray ny fanjakan’i Israely sy hanjaka amim-pahamarinana amin’ny olombelona rehetra.
Vola volafotsy amin'ny anaran'i Bar Kokba
Nanangona tafika lehibe i Bar Kokba, izay nahitana Jiosy avy ao Jodea sy avy amin’ny firenena hafa ny Atsinanana. Nandresy ny tafika romana i Bar Kokba sady naka an’i Jerosalema sy tanan-dehibe dimampolo eo ho eo ary tanàna madinika maro koa.
Ny toerana nisy an'i Betara
Nanangana tafika vaovao indray i Hadriano nefa mbola ravan’ny tafik’i Bar Kokba izany. Noho izany dia niantso mpitari-tafika mahay i Hadriano, dia i Jolio Severo (latina: Sextus Julius Severus), izay niady nandritra ny andro maro ka tanapitra ny fikomiana jiosy tao amin’ny famaharana Betàra (hebreo: בֵּיתַּר / Bethar) ao akaikin’i Jerosalema izy tamin’ny volana Aogositra 135. Tamin’izany no nahafatesan’i Bar Kokba.
Hita tao amin'ny "https://mg.wikipedia.org/w/index.php?title=Simona_Bar_Kokba&oldid=975630"
Voaova farany tamin'ny 12 Oktobra 2019 amin'ny 14:05 ity pejy ity.